theZOMI: [mrsorcerer:37717] Fwd: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] သီပေါမြို့ရဲ့ နောက်ဆုံးစော်ဘွား
[mrsorcerer:37717] Fwd: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] သီပေါမြို့ရဲ့ နောက်ဆုံးစော်ဘွား
Subject: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] သီပေါမြို့ရဲ့ နောက်ဆုံးစော်ဘွား
သီပေါမြို့လုို့လူသိများတဲ့ မြောက်ပုိုင်းသျှမ်းပြည်နယ်ရဲ့ မောသျှမ်းတောင်တန်းများ ပတ်လည်ဝန်းရံ အလှဆင်ထား သဖွယ် နံဘေးက တစိမ့်စိမ့် တလိမ့်လိမ့်နဲ့ ဒုတ္ဘ၀တီမြစ် ကလေးတစ်စင်းက ပတ်ချာ လည့်ကာ စီးဆင်းနေပြီး သာယာလွမ်းမော ဘယ်ကောင်းတဲ့ မောသျှမ်းလူမျိုးတုို့ရဲ သမုိုင်းအထင်ကရမြို့ လေးတမြို့ပါ ဒီသီပေါမြို့ လေးဟာ မြန်မာ့သမုိုင်း တလျှောက်မှာ နေရယူလျှက် ရှိနေပါတယ်။ သီပေါမြို့လေးဟာ မောကုိုး ပြည်ထောင် မှာ ပါဝင်ခဲ့သလုို့ ရှေးယခင် မြို့တည်ပြီးချိန်မှ စ၍ သျှမ်းစော်ဘွား အဆက်ဆက် ကနေ အဆင့်ဆင့် အုပ်ချုပ်လာခဲ့တဲ့မြို့လေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ထုိုအချိန် တိမ်းခေါ်တုိုင်းပြည်ကြီးသည် မငြိမ်မသက်ဖြစ်ရာက အမှတ်ကြီးလေးဦးက လေးနယ်စီခွဲပြီး အုပ်ချုပ်ခဲ့ရာကုို သျှမ်းတုို့က စီကော့လုို့ခေါ်ပါတယ် သီဆုိုတာက သျှမ်းလုို လေး ကော့ဆုိုတာ လူအရေအတွက် လူလေးယောက် အုပ်ချုပ်လုို့ ဆီကော့ လုို့ခေါ်ဆုိုတာ ဖြစ်ပါတယ် .. ဒါကြောင့် စီကော့ စီကော့လုို့ ခေါ်ဆုိုရာက နောက်ပုိုင်း ဆီပေါက် သုို့ပြောင်းလည်းလာပါတယ် ဆီဆုိုတာက လေး ပေါက်ဆုိုတာက ရပ်ကွက် ဒီလုိုနဲ့ ရပ်ကွက်လေးခု ဆီပေါက်လုို့ ခေါ်ပါတယ် အဲ့ဒီဆီပေါက် ကနေပြီးတော့ ဆီပေါ့ ဆုိုပြီးတော့ အသွင်ကူးပြောင်း လာရာမှ နောက်ဆုံးမှာ သီပေါ ရယ်လုို့ခေါ်ဆုိုခဲ့ကြပါသည်။(မယ်ခူးခေးရှဲန်)
၁၉၅၃-ခုနှစ်တွင် ကော်လိုရာဒိုရှိ သူငယ်ချင်းတစ်ဦးအိမ်တွင်ပင်လက်ထပ်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့ ၂ယောက် လက်ထပ်ပြီးတော့.. အင်ဂျီက..ယောင်နောက်ဆံထုံးပါ.. လိုက်လာခဲ့တယ်။ သူတို့ သဘောင်္ကြီး ရန်ကုန် ဆိပ်ကမ်းကို ကပ်ကာနီးလို့ .. အလံတွေ ပုဝါတွေ တရမ်းရမ်း..ဗုံမောင်းသံ တညံညံ နဲ့ ဆိပ်ကမ်းပြည့် ကြိုနေကြတဲ့ ရှမ်းလူမျိုးတွေကို မြင်တော့မှ…. "There is something I have to tell you, my dear." လို့ ပြောလိုက်တဲ့..ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ စကားအဆုံးမှာ… သူမဘ၀ဟာ အရှင်လတ်လတ်ကနေပြီး.. မင်းသမီးတပါး ဖြစ်သွားခဲ့ပြီး…ပြိုင်တည်းမှာပဲ..ရှုပ်ထွေးလာနိုင်မဲ့ သူ့ အနာဂါတ်ကိုလည်း အာရုံရမိလိုက်တယ်..လို့.. အင်ဂျီက လွမ်းဆွတ် ထားပါတယ်။ သီပေါသို့ ရောက်ရှိပြီး လအတန်ကြာတွင် တရားဝင်ရိုးရာ လက်ထပ်အခမ်းအနားကို ကျင်းပခဲ့ပြီး၊ ဗေဒင်နက္ခတ်အရ မဟာဒေဝီ စဝ်သုစန္ဒီ ဟူသော ရှမ်းအမည်ကို ရရှိခဲ့သည်။ သူတို့ မောင်နှံ သီပေါ ဟော်နန်းကို ရောက်တဲ့ အချိန်ကစပြီး..အဲဒီ နယ်တခွင်မှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ရေးတွေ ဖြစ်လာ တော့တယ်။ စပ်ကြာဆိုင်က..သူကိုယ်တိုင် လူဖြစ်ခဲ့တဲ့ မြေရှင်ပဒေသရာဇ် စနစ်ကြီး ကို ပြောင်းလဲဖို့ ကြိုးစားရင်း..
အဲဒီ အချိန်မှာ လူမမယ် သမီး ၂ယောက်နဲ့ ကျန်ခဲ့တဲ့ အင်ဂျီ ကို သီပေါ ဟော်မှာပဲ.. အစောင့်အကြပ် ထူထပ်စွာ နဲ့ အကျယ်ချုပ် ထားခဲ့တယ်။ ဘာကိုမှ မကြောက်တတ်ခဲ့တဲ့ အင်ဂျီ ကလည်း.. သူ့ဆက်သွယ်နိုင်သမျှ အရာရှိ စစ်အာဏာပိုင် မှန်သမျှ ထံ လိုက်လံ စုံစမ်းခဲ့ပေမဲ့.. "I am writing this secretly. I am being locked up in the army lockup at Ba Htoo Myo at Lawksawk… Miss you all. Conditions here are not clean. Hope to see you soon. Cheer up yourself! I am still OK. Love, Sao Kya Seng." ဆိုတဲ့ လျှို့ဝှက်စွာ ရောက်လာတဲ့. စာလေးတစောင်က လွဲလို့.. ဘာသဲလွန်စ မှ မရခဲ့တော့ဘူး။
Posted By Blogger to လူဗိုလ်ဟူသည် ... at 3/28/2013 10:41:00 AM